2015ပြီလ5| 55 ၏စာမျက်နှာ 2020 | NAB သတင်းများ | XNUMX NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » ဧပြီလ (စာမျက်နှာ 5)
ဧပြီလ 24, 2015 - - PrimeTime Lighting Texas ပြည်နယ် Dallas Dallas မြို့, တက္ကဆပ်အတွက်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးအထုတ်လွှင့်စတူဒီယိုနှင့်ဗီဒီယိုကွန်ဖရအလင်းလ်တာတည်ဆောက်တိတ်တဆိတ် Texas ပြည်နယ် Dallas ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာအခြေစိုက်နှစ်ဆယ်နှစ်ကျော်အဘို့, PrimeTime Lighting စနစ်များဆန်းသစ်နှင့်တိကျစွာအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာအလင်းရောင်စနစ်များကိုထုတ်လုပ်ထားပါတယ် , LED မီးနှင့်ထုတ်လွှင့်စတူဒီယိုနှင့်ဗီဒီယိုကွန်ဖရအလင်းလ်တာများအတွက်ချောင်း luminaires အပါအဝငျ။ "ရုပ်မြင်သံကြားဘူတာရုံအကြီးအကဲ ...
အပြာရောင်လိုင်း DPA မိုက်ခရိုဖုန်း၏ Trail အပေါ်ဟော့ဖြစ်ပါသည်
ToneMesa, Inc အပြာရောင်လိုင်း, Switzer Entertainment ကအဘို့ယာကုပ်အမျိုးကို Cooney ကရေးသားများနှင့်ညွှန်ကြားလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု-ထုပ်ပိုး heist ရုပ်ရှင်များအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည့်အခါအသင်းသူတို့အလုပ်လျှောက်တွင် DPA မိုက်ခရိုဖုန်းကိုပေးပို့ရမည်ချင်ပါတယ်ကြောင်းချက်ချင်းသိသည်။ screet ™ 4061 အသေးစားနှင့်ဃ: DPA ရဲ့ဃအသုံးပြုခြင်း 4017A သေနတ်များနှင့် 4018A မိုက်ခရိုဖုန်း™ dicate, ထုတ်လုပ်မှုအသံရောနှောပတေရုသØlstedဿုံကိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ် ...
နယူး PESA Blade ကိုစနစ် NewBay မီဒီယာ 2015 NAB Show ကိုဆုချီးမြှင့်ဆွတ်ခူး
Huntsville, Alabama - PESA တစ်ဦးဦးဆောင်ဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်သူ streaming များဖြေရှင်းချက်၏အဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံနှင့်ဗီဒီယိုဖြန့်ဖြူးထုတ်ကုန်မှာပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကယင်း၏သစ်ကို PESA Blade ကိုစနစ် (PBS) အတွက် NewBay မီဒီယာရဲ့ Show ကိုဆုချီးမြှင့်၏အကောင်းဆုံး, တီဗီနည်းပညာမဂ္ဂဇင်းအားဖြင့်တင်ပြလက်ခံရရှိ အဆိုပါ 2015 NAB ပြရန်။ အဆိုပါစီးပွားဖြစ်ဘောင်များအတွက်ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုကတ်များ PESA အပေါ်အခြေခံထားတယ် ...
Comigo နယူးအားကစားပြိုင်ပွဲရေးစင်တာနှင့် WatchApps နှင့်အတူတီဗီ Viewer ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင်
ဧပြီလ 2015, 23 - - တီဗီ Connect ကို 2015 မှာ Comigo Pay-TV ကိုလုပ်ငန်းရှင်များက New အခွန်ဝန်ကြီးဌာန Streams YARKONA, အစ္စရေး မှစ. တစ်ပိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရုပ်မြင်သံကြားအတွေ့အကြုံနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ကယ်ယူနိုငျပုံကိုသရုပ်ပြလိမ့်မည် 2015 ရပ်, တီဗီ Connect ကို 19 မှာ Comigo အဆိုပါအသစ်န်ဆောင်မှုကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် ကြည့်ရှုသူထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အော်ပရေတာ '' ဝင်ငွေစီးမြှင့်တင်ရန်ဒီဇိုင်းလစာ-TV ကိုဈေးကွက်။ ပြပွဲကာလအတွင်း Comigo လိမ့်မည် ...
IABM ဂိမ်း Changer Named Tedial
ဆုပေးပွဲ Reception စဉ်အတွင်း NAB မှာကြေညာလိုက်သည်ဆုရရှိသူ, အင်္ဂါနေ့, ဧပြီလ 14 ဂါ, စပိန် - Tedial, ဦးဆောင်လွတ်လပ်သောပေးခဲ့သည်နည်းပညာဖြေရှင်းချက်အထူးကု, NAB 2015 မှာယင်း၏ Tedial ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်™များအတွက် System ကို Automation နှင့်ထိန်းချုပ်ရေးအမျိုးအစားထဲမှာ IABM ရဲ့ဂိမ်း Changer Award ဆုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါဆုသည်အဘယ်သူ၏ဖြေရှင်းချက်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ကိုးအမျိုးအစားအတွက်ထူးချွန်အောင်မြင်မှုကိုယ်စားပြုကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။ ဆုရရှိသူခဲ့ကြသည် ...
Dalet CyBC မှာမော်ကွန်းများကိုစီမံခန့်ခွဲ
Dalet မီဒီယာဘဝကမော်ကွန်းတိုက် centralizes, CyBC တီဗီကိုဖြတ်ပြီး Archive content များအတွက်ထုတ်လုပ်မှုပလက်ဖောင်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်, ရေဒီယိုနှင့်အွန်လိုင်းမီဒီယာဌာနများပဲရစ်, ပြင်သစ် - ဧပြီလ 23, 2015 - Dalet ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစနစ်များ, မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများအဘို့အ software ကို-based ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ဆိုက်ပရပ်စ်အသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း (CyBC) ထိုက၎င်း၏ထုတ်လွှင့်မော်ကွန်းတိုက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတက်စေရန် Dalet မီဒီယာဘဝကအလုပ်သိရသည်။ ...
ပေါက်ကွဲလုနီးပါး lineup မှလေးခုနဲ့ LED တွင်-ကင်မရာမီးမိတ်ဆက် - ရောင်းမည်တွင် Now!
ဧပြီ - ထိုဆုရအလင်းရောင်နှင့်ဓာတ်ပုံဆက်စပ်ပစ္စည်း line ကနေ New ကို On-ကင်မရာအလင်းရောင်ဖြေရှင်းချက်အဆိုပါပေါက်ကွဲလုနီးပါး 300 LED မီးသည်ပေါက်ကွဲလုနီးပါး 198 LED မီးသည်ပေါက်ကွဲလုနီးပါး 198 LED ကိုသာ Adorama New York မှာရရှိနိုင်သည့်ပေါက်ကွဲလုနီးပါးသတင်းထောက်စူပါ Compact 150 နဲ့ LED, NY ပါဝင်သည် 22, 2015 - ပေါက်ကွဲလုနီးပါး, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများတစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ပါဝါဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ...
လိမ္မော်ရောင် Barrel မီဒီယာကို select Matrix Solutions
ဧပြီလ 22, 2015 - - Matrix Solutions, မီဒီယာဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးဟာစီမံခန့်ခွဲမှု (CRM) ၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးနဲ့အရောင်းထောက်လှမ်းရေးဆော့ဖျဝဲသောလိမ္မော်ရောင် Barrel မီဒီယာ, မြို့ပြကြော်ငြာပန်းချီကားများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြသမှု၏ဖန်ဆင်းရှင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းနှင့်ကိုလံဘတ်, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အခြေစိုက်ထားပြီး PA ဆိုပြီး Pittsburgh, , မရွေးနှင့် Matrix ၏ cloud-based software ကိုပလက်ဖောင်းအကောင်အထည်ဖော်။ Matrix ၏မီဒီယာ-သတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမှလိမ္မော်ရောင် Barrel မီဒီယာကို enable ပါလိမ့်မယ် ...